Zara waxay ku habboon tahay inay kordhiso adkeynta dharkaaga dharka qiimo jaban | Ragga Stylish
Dharka ugu wanaagsan ee Zara
Sida had iyo jeer, suudhadhka ugu fiican ee Zara ayaa lagu gartaa inay yihiin kuwo qurux badan sida ay u awoodi karaan. Waa mid ka mid ah silsiladaha la tixgelinayo haddii aad u baahan tahay Kordhi adkaysiga soo-ururinta dharkaaga miisaaniyad adag.
Shirkada Isbaanishka waxay soo bandhigtaa labisyo habeen iyo maalinba. Soo uruurintiisa waxaa ku jira qaybo noocyo kala duwan ah oo tagaya xafiiska, iyo sidoo kale tuxedos iyo suudhadh ka badan dhererka dhacdooyinka habeenkii ee la soo bandhigo.
1 Zara ayaa ku habboon xafiiska
1.1 Dacwadaha madow
1.2 Suudh khafiif ah
2 Dharka fiidkii ee Zara
Zara ayaa ku habboon xafiiska
Haddii lambarkaaga dharka xafiisku adag yahay, waxaad u baahan tahay saamaynta labiska ee kaliya suudka lagu daro shaati, xarkaha iyo kabaha dharka ayaa ku siin kara. Sida aan hoos ku arki doonno, dacwadaha sidoo kale waxay ka shaqeeyaan goobaha shaqada halkaasoo nambarka labbiska uu ka nasan yahay.
Iyada oo leh maqaarka maqaarka, kan ugu horreeya ee xulashadan Zara suits waa ikhtiyaar weyn xafiiska. Naqshadeynta xarrago leh waa inaan ku darnaa xaqiiqda inay tahay mid wax ku ool ah oo raaxo leh. Sababta ayaa ah dharkeeda oo leh laastikada, biyo-celiyaha iyo ka hortagga duuduubka.
Waad sameyn kartaa xarig la'aan ama waxaad ku beddeli kartaa labadaba shaati iyo shaati shaati aasaasi ah ama shaati polo caqli badan. Haddii aad dareento in macnaha guud uu sax yahay, sidoo kale waxaad xiran kartaa isboorti halkii aad kabaha dharka ka xiran lahayd.
Maaddaama Zara ay si gooni ah u iibineyso blazers-ka iyo surwaalka, si loo helo qiimaha ugu dambeeya ee dacwada waa inaan ku darnaa qaddarka u dhigma mid kasta oo ka mid ah qaybaha. Xaalada dacwada sawirka kore qiimaha waa 119,90 euro (79.95 euro oo jaakada ah iyo 39.95 euro oo surwaal ah).
Haddii aad doorbideyso daabacadaha, tixgeli dharkan jilicsan. Sabab kuu oggolaan doonta inaad ka tagto a cusub ee xafiiska kujiraan adigoon qaadin qatar ka badan intii loo baahnaa (xeer suul marka ay timaado labiska shaqada). Furaha ayaa ku jira miyir-qabka iyo hawada caadiga ah.
Qiimaha ugu dambeeya ee dharkan buluugga ah ee buluugga ah ayaa ah 119.90 euro (79.95 euro oo jaakada ah iyo 39.95 euro oo surwaal ah). Sidii kiiskii hore, waxaad isugu dari kartaa habka caadiga ah ama waxaad siin kartaa taabasho casri ah oo leh funaanado iyo kabo isboorti.
Suudh khafiif ah
Bixi vibes aad u Harvey Specter ah oo ku jira suudkan buluugga ah oo leh jilbado waaweyn oo fallaar leh, sida Tom Ford iyo jilaaga 'Suits' iyaga oo kale ah. Mid ka mid ah qaababka ugu quruxda badan ee Zara, iyo sidoo kale sharad aamin ah oo lagu bixinayo muuqaal dhab ah oo xirfad leh kulamada muhiimka ah.
Laabta farta lagu fiiqo ayaa ina tusaya habka loo socdo. In kasta oo labadii hore ay bixiyeen suurtagalnimada in lagu raaco iyaga oo leh dhar caadi ah, tani waxay la shaqaysaa oo keliya dharka rasmiga ah (funaanadda dharka, xarkaha ballaadhan iyo kabaha dharka). Fikrad wanaagsan xafiisyada leh labiska dharka adag, qiimaha ugu dambeeya ee dacwadani waa 149.90 euro (99.95 euro oo jaakada ah iyo 49.95 euro oo surwaal ah).
Isha shimbirta (oo aan muhiim ahayn in lagu qaldo houndstooth) waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican haddii aad raadineysid suud aan gebi ahaanba simnayn. Dharkani shaki kuma jiro inuu yahay hab aad u qurux badan oo lagu daro dardar iyo faahfaahin ku habboon..
Qiimaha ugu dambeeya ee dacwadani waa 119.90 euro (79.95 euro oo jaakada ah iyo 39.95 euro oo surwaal ah).
Dharka fiidkii ee Zara
Dhar labiska ragga oo adag waa inuu ku jiraa dhar ku habboon labada maalin iyo fiidba. Yaree codadka iftiinka iyo daabacaadaha maalinta iyo xirtaan suudh madow iyo tuxedos (haddii casuumaaddu ku weydiiso) habeen habeyn.
Halkan waxaan ku haynaa Suudhka madow ee caadiga ah ee nin waliba ku haysto qolkiisa, laakiin leh isbeddel casri ah. Lugaha surwaalka waa ka gaaban yihiin sida caadiga ah qaabkooduna waxyar buu ka dhegsan yahay.
Ku habboon is biirsaday iyo cashada, qiimaha ugu dambeeya ee suudkan, mid ka mid ah dacwadaha badan ee Zara ee midabkan leh, waa 89.90 euro (59.95 euro oo jaakadda ah iyo 29.95 euro oo surwaal ah).
Soo bandhigida dharka Zara sidoo kale waxaa ku jira tuxedos. Tani way kuu oggolaaneysaa dejinta baarka sare ee dhacdooyinka Black Tie iyada oo lagu beddelayo maalgelin yar. In kasta oo madow si ballaadhan loo isticmaalo, buluug madow ayaa ugu habboon dharkan haddii aad rabto inaad yareyso fursadaha lagu qaldo adeegaha.
Qiimaha ugu dambeeya ee dacwadani waa 119.90 euro (79.95 euro jaakada cashada iyo 39.95 euro oo surwaal ah).
Waxaa jira seddex nooc oo lapel ah: darajo, dhibic iyo shaal. Haddii aad doorbideyso tan dambe, taas oo ficil ahaan u gaar ah tuxedo, tixgeli dharkan, sidoo kale buluug madow. Faahfaahin kale oo ka duwan tii hore ee tuxedo ayaa ah in halkan surwaalku aanu ku jirin koox-kooxeedyada.
Qiimaha ugu dambeeya ee dharka fiidkan sidoo kale waa 119.90 euro (79.95 euro jaakada cashada iyo 39.95 euro oo surwaal ah). Si aad u dhammaystirto labadaba suudhadhka Zara waxaad u baahan doontaa shaati dhar cad, kabo labis iyo qaanso qaanso madow ama midab la mid ah jaakadda. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa shaati ama jaakad haddii aad u malaynayso inay muhiim tahay inaadan arag saddexagalka cad ee u dhexeeya jaakadda iyo dhexda surwaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dharka ugu wanaagsan ee Zara
Dharka dhogorta leh